Hatao antsapaka ny laharan’ny kandidà | NewsMada
Hatao antsapaka ny laharan’ny kandidà
“Hatao ny asabotsy izao eny Nanisana ny antsapaka amin’ny laharan’ny kandidà ho ao anatin’ny biletà tokana sy ny eny amin’ny petadrindrina”, hoy ny fanambaran’ny Ceni, omaly. Hiatrika izany ny solontenan’ireo mpilatsaka hofidina. Manomboka amin’ny laharana voalohany ka hatramin’ny laharana faha-36 izany ny filaharan’ny kandidà, ho hita any amin’ny taratasin-datsabato sy eny amin’ny afisy.
Folo ireo kandidà nolavin’ny HCC
Miisa 36 amin’ireo 46 nametraka ny antontan-taratasy eny amin’ny HCC no nankatoavin’ny HCC ny firotsahan-kofidina ho filohan’ny Repoblika amin’ny 7 novambra. Anisan’ireo folo nolavin’ny HCC ny firotsahan-kofiny ny kandidà isany:
– Rasoamaka James Andriatsihety, natolotry ny Mamiko ny taniko Madagasikara;
– Rakoto Jean-Pierre, natolotry ny Raiamandreny jirom-pirenena (RJP);
– Mahavimbina Alain, natolotry ny Gasikara Antsika rehetra (Gar);
– Savaron Rasoamalala Armandine Malala, natolotry ny Espace Vert;
– Raharimanana Mamy Nirina Aubertin, natolotry ny Madagasikara endrika vanona (Maeva);
– Bezara Eliane Virginie (Ninie Donia), natolotry ny Gasy miara-mihinana (GMM)
– Ratsimbazafy Georges Désiré, Parrainage;
– Rasoloniaina Korodo Jean Félicien, natolotry ny Tanora andrin’ny fampandrosoana (Tafa);
– Andrianirina Max Fabien, natolotry ny Fanasin’i Madagasikara (FM)
– Tsiranana Philippe Madiomanana, natolotry ny Gasy mifankatia (Gasymi);
Anisan’ny nandavan’ny HCC ny firotsahan-kofidin’izy ireo ny tsy fisian’ny taratasy fanamarinana ny fametrahana ny fandraisana anjara amin’ny vidin’ny fanontam-printy, 50 tapiritrisa Ar. Eo koa ny tsy fisian’ny mpiantoka, tsy ao anatin’ny lisitry ny minisiteran’ny Atitany ny antoko nanolotra azy, na antoko efa nanolotra kandidà hafa.
Misy amin’izy ireo no efa nirotsa-kofidina, taona 2013, toa an-dRakoto Jean-Pierre. Teo koa ny efa nandrotsaka antontan-taratasy tamin’izany fa tsy nankatoavin’ny HCC: i Savaron Rasoamalala Armandine Malala, i Tsiranana Philippe Madiomanana.